Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Oo Ka Hadashay Xaqiijinta Amniga Imtixaanaadka – Goobjoog News
Xasan Xuseen Maxamed wasiirka hub ka dhigista iyo dhaqan celinta Maleyshiyaadka ahna ku simaha wasiirka amniga maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda amniga ay si weyn u adkeysay ammaanka goobaha kala duwan ee uu ka dhacayo Imtixaanaadka ay dowladda federaalka ah qaadayso.
Xasan Xuseen ayaa sheegay in saddex goobood oo kala duwan ay imtixaanaadkan ay ka dhacayaan iyadoo la geeyay goobahaasi ciidamo kala duwan oo is kugu jira boolis iyo nabad sugid si loo ilaaliyo ammaanka goobaha Imtixaanka.
“ Ciidamada waxay u diyaar garoobeen in amniga goobaha uu Imtixaanka uu ka dhacayo ay sugaan meel walba oo ka tirsan deegaannada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya, ardada Imtixaanka galaysana waxaan u rajeynayaa inuu ilaahey u fudideeyo”.
Maalintii shalay ayaa waxay ka mid aheyd magaalada Baydhabo goobaha uu ka bilowday Imtixaanka Mideysan oo ay dowladda Soomaaliya ay qaadeyso .
Goobaha Imtixaanka uu ka dhacayo ee magaalada Baydhabo ayaa waxa ay yihiin saddex goobood oo waaweyn kuwaasi oo loogu talo galay in lagu qaado Imtixaanka mideysan iyadoo goobahaas si weyn loo adkeeyay ammaankooda.
Kalafadhiga 35-aad Ee Baarlamaanka Puntland Oo Maanta Furmay (Sawirro)
Jjlane jawcfk Brand name viagra printable cialis coupon
Opgtqz bawovh Cialis pharmacy buy cialis online safely
Mbwgqw nvfhwt Samples of cialis rx pharmacy
Sjhqrw hzdnxh cvs pharmacy Kmrts
Maamulka Degmada Buuloburde Oo Ku Baaqay Gurmad Lala Gaaro Dadka Ku Dhibban Degmadaasi
online essay writers literature review website analysis sect...
help with ed https://sildenafilxxl.com/ viagra coupon...
thesis based essay case study writer homework help ww2...
viagra 100g buy viagra montreal viagra for women in india...
essay maker free paper writer thesis statement for compare a...